I-Sai Noi Beach Bungalows: i-Ocean Bungalow
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguPatricia
Indawo eselunxwemeni esanda kwakhiwa, ebanzi, elingana nosapho enombono we-bay, ime kumgama nje we-15 leemitha ukusuka kunxweme olunoxolo lwetropikhi apho ihlathi lidibana nolwandle.
Yonwabela imo epholileyo ethe kratya kude kwisiqhelo sabakhenkethi. Buyela emva kwi-hammock okanye kwindawo yokuphumla elangeni kwaye wonwabele uxolo, ukuzola kunye nemibono ebalaseleyo yokutshona kwelanga ukusuka kwindawo yethu yolwandle.
Le bungalow ebanzi yosapho imalunga nendawo, indawo, indawo!
Inomnyango wayo wabucala kunye neembono ezigcweleyo zolwandle ukusuka kwiveranda. Kwaye ime nje ngeemitha ukusuka elunxwemeni. Ngamanyathelo ambalwa, uya kuba nolwandlekazi oluluhlaza phambi kwakho kunye nesanti yegolide phakathi kweenzwane zakho!
IBHUNGALOW YOKUBONGA ULWANDLE:
Le bungalow ilula yaselwandle inekhonkrithi epholileyo yangaphakathi kwaye ibandakanya iibhedi ezimbini ezilingana nokumkani omkhulu, iishelufa, iireyile ezijingayo, umoya opholileyo, amakhethini amnyama kunye negumbi lokuhlambela eline-en suite eneshampu encomekayo kunye nejeli yeshawa. Kukwakho nesikhenkcezisi esincinci esineebhotile zamanzi ezinokuzaliswa kwakhona ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo ukusuka kwisibandisi samanzi kwikhitshi lethu elihlangeneyo.
Singabonelela ngoomatrasi ababini bomgangatho omnye okanye ibhedi ukuba unabantwana okanye abantu abongezelelweyo kwiqela lakho.
Into ekhethekileyo malunga nendawo yethu yokuhlala kukuba unendawo eninzi kuwe. Zintathu kuphela ezinye iindawo zokuhlala kule ndawo. I-terrace yethu ephambili ilungile elunxwemeni, apho unokuphumla kwaye ujabulele umbono we-bay. Kulwandle lwethu lwabucala unokhetho lweendawo zokuhlala zelanga kunye nesithuba esaneleyo esikujikelezile ukuze ukwazi ukuphumla neqabane lakho okanye usapho lwakho.
Nangona kukho iindawo zokutyela ezilungileyo ezikufutshane ezithengisa izitya zaseThai kunye nezaseYurophu unganqwenela ukusebenzisa ikhitshi lethu lesitayela saseThai.
Ukutya kunokuthengwa kwilali esebumelwaneni yokuloba iBang Bao ekunokufikelelwa kuyo ngokulula ngeenyawo, ngemoped okanye iteksi.
Ungathenga intlanzi entsha kwi-pier, ndwendwela i-7-11 yempahla epakishweyo okanye uye kwiivenkile zaseThai zendawo ukuze ufumane imveliso entsha.
Sibonelela ngayo yonke into oyifunayo kubandakanya iimbiza, iipani, itoaster, i-cutlery, i-smoothie maker, i-toastie maker, iiglasi kunye neepleyiti. Kwaye kukho ifriji eneshelufu yakho yokugcina ukutya neziselo. Sikwanayo neBBQ encinci.
Sizama ukwenza konke esinako ukuphinda sisebenzise kwaye siphinde sisetyenziswe. Simema iindwendwe ukuba ziphinde zizalise iibhotile zazo zamanzi simahla kwisibandisi samanzi ekhitshini kwaye apho kunokwenzeka zisebenzise imigqomo yokurisayikilisha.
Yenza eyona ndawo imangalisayo yecala elunxwemeni kunye ne-vibe epholileyo. Phumla emthunzini ngencwadi elungileyo kwenye yee-hammocks zethu, utye i-al fresco, okanye ubambe indawo yokuphumla elangeni kwaye wonwabele uxolo kunye nokuzola kobomi besiqithi. Le ikwayindawo egqibeleleyo yokuthatha ibhiya ngokuhlwa kwaye ubukele ukutshona kwelanga okumangalisayo.
ISai Noi lunxweme oluncinci oluzolileyo olukude nezihlwele. Ilungele abantwana njengoko amanzi engekho nzulu kwaye akukho maza olwandle okanye amaza amakhulu. Sikwanazo neentlobo ngeentlobo zeethoyi zaselwandle kunye nee-inflatables zabantwana abanokuthi badlale ngazo. Nceda uqaphele ukuba kunokubakho amatye elwandle kumaza aphantsi kakhulu ngamaxesha athile enyanga.
INJA YOMHLALI WASEBHEKINI:
Uya kudibana nenja yethu ehlala elunxwemeni, Hi-Lo, ujikeleze indlela! Unendalo entle kakhulu kwaye uhleli nabantwana.
Iibhedi ezinkulu eziyi-2, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Ulwandle lwaseSai Noi lusemazantsi esiqithi luthe qelele kancinci kwindawo eqhelekileyo yabakhenkethi. Apha kulapho ihlathi lidibana khona nolwandle kwaye yeyona ndawo igqibeleleyo ukuba ujonge indalo ethile kunye ne-tropical vibe ebekwe ngasemva.
Zininzi iindawo zokutyela ezilungileyo kunye neebar zaselwandle kumgama olingana nepropathi.
ISai Noi lunxweme oluhle kakhulu oluncinci. Iikayaks kunye neebhodi ze-SUP zinokuqeshwa apha. Unokundwendwela ulwandle lwaseKlong Koi olukhulu kunye nemizuzu nje embalwa uhambe.
Ilali yokuloba yaseBang Bao kukuhamba nje imizuzu eli-15 kwaye inepier eneevenkile kunye neendawo zokutyela. Uhambo lokuya kwiziqithi ezingabamelwane, ukuntywila kwi-scuba diving kunye nohambo lokuhamba nge-snorkelling zonke zihamba zisuka kwi-Bang Bao pier. Unako kwakhona ukuloba ukusuka ekupheleni pier.
Ukuba uyathanda ukwenza itheko, iLonely Beach yimizuzu nje eli-15 yokuqhuba.
Umphathi wethu, u-Ten, uya kuhlala kwindawo yonke imihla kwaye uya kuba lapho ukuze akubulise xa ufika. Uya kukuvuyela ukukunceda ukuba unemibuzo.
Nceda uqaphele: Asinayo iiyure ezingama-24 zokungena. Ngena ukusuka ngo-12pm ukuya ku-6pm.